ဂိဒေါင်၏စစ်တပ် | Gideon's Army! | Real Conversion
ဇွန်လ ( ၂၄ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၌ပါသောလူတို့သည် အလွန်များ၍၊ သူတို့လက်၌ မိဒျန်လူတို့ကို ငါမအပ်ရ။ အပ်လျှင် ဣသရေလအမျိုး က၊ ငါ့လက်ရုံးသည် ငါ့ကိုကယ်တင်ပြီဟု ငါ့တဘက်၌ ဝါကြွားကြ လိမ့်မည်။” ( တရား ၇း ၂ )
ရိုးစင်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အင်မတန်မှအရေးကြီးသည့် အ ကြောင်းအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဂိဒေါင်သည် မှားယွင်းဆိုးယုတ်သောအချိန်ကာလတွင် အ သက်ရှင်သော လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချက်က ကျွန်ုပ်တို့၏အရုံစူးစိုက်မှု ကို ချက်ချင်း ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆိုးသွင်း သည့်အချိန်ကာလတွင် အခု အသက်ရှင်နေလျက်ရှိပါသည်။
၁။ ပထမအချက်၊ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်ပယ်ခြင်း။
ဣသရေလူတို့သည် ဘုရားသခင်အမြင်၌ ဆိုးသွင်းသည့်အခြေအနေတွင် အသက်ရှင် နေထိုင် ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်သည် မိဒျန်လူမျိုးတို့၏ကျွန်ပြုစေခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို ပြစ်ဒဏ်ပေး ခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဣသရေလူတို့၏ရန်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဣသရေ လူတို့သည် ဤရိုင်းစိုင်းသော မိဒျန်လူမျိုးတို့၏ ဆိုးသွင်းသည့် ဆက်ဆံမှုကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ မိဒျန်လူမျိုးတို့သည် အလွန်သန်မာကြ သည်ဖြစ်၍ ဣသရေလူတို့၏သီးနှံများကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြ သည်။ သူတို့သိုးများ၊ ကျွဲများနှင့်မြည်းများကို လုယူခဲ့ကြသည်။ ဣသရေလူတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီး မျှော်လင့်ချက်မဲ့စေကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ အော်ဟစ် ဆုတောင်း ကြပါသည်။
ထို့နောက် ဘုရားသခင်သည် ဂိဒေါင်ထံ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ သူသည် မိဒျန်လူမျိုးတို့ ၏ရန်မှပုန်းရှောင်နေစဉ် ဘုရားသခင်သည် သူ့ထံသို့ ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘုရား သခင်က ဂိဒေါင်အား “ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်အတူရှိသည်၊ သင်သည် စွမ်းတန်ခိုးကြီး သောလူဖြစ်မည်” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ( တရား ၆း ၁၂ ) ကျွန်တော်သည် ဆန်ဖရင်ဆစ္စကိုရှိ လီဗရယ်၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ငြင်းပယ်သောကျမ်း စာကျောင်းသို့သွားသောအခါတွင် ရဲရင့်သောလူမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်သည် အောက်ကျို့ခံပြီး ရိုင်းစိုင်းသော နှစ်ခြင်းတရားဟောဆရာလေးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသင်တန်းကျောင်း၌ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာက ခေတ်သစ်ဧဝံဂေလိများအပေါ် အမျက်ထွက်မှုကိုဖြစ်လာစေ ပါသည်။ သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှိသော ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိကြပါ။ သူတို့ကို မိဒျန်လူမျိုးများက ထိန်းချုပ်နေကြသည်။ ယင်းတို့မှာ တင်းကြပ်သောအိတ်ကပ်ထဲ၌ ဘုရားသခင်ကို ထည့်သွင်းလိုသူများ၊ သူတို့အတွေး၊ သူတို့အသက်တာကို ဘုရားသခင်ထိန်း ချုပ်ရန် အလိုမရှိသူများဖြစ်ကြသည်။
ဒေါက်တာ David F. Wells က ကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလတွင်ရှိသော ဧဝံဂေလိ၏ ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သက်သေထူသော စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပါ သည်။ ၎င်းကို “ သမ္မာတရားအတွက်နေရာမရှိ၊ သို့မဟုတ် ဧဝံဂေလိဓမ္မပညာတွင် မည်သည့် အရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း” ဟု အမည်ရသည်။ (Eerdmans၊ ၁၉၉၃ ) ဒေါက်တာ Wells သည် အမျက်ကြီးသောသူဖြစ်သည်။ “ဧဝံဂေလိကမ္ဘာသည် ၎င်း၏မူရင်းကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီ” ဟုဆိုပါ သည်။ ( စာ- ၂၉၅ ) ဧဝံဂေလိအသင်းတော်များသည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များအဖြစ်သို့ လူ ငယ်များကို ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။ သူတို့သည် ပျော့ပျောင်းကြသည်။ အားနည်းကြသည်။ တကိုယ်ကောင်းဆန်ကြသည်။ လူများက သူတို့အပေါ် ထင်မြင်ယူဆကြမည့်ကို စိုးရွံ့ပြီး မ ပြောရဲမဆိုရဲဖြစ်ကြသည်။ ဧဝံဂေလိတည်ဆောက်မှုသည် အသင်းတော်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း နှင့်အသက်ရှင်ခြင်းကို မြင်တွေ့လိုသောသူတစ်ဦးဦးကို တိုက်ခိုက်ရလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာ Wells က “ညီညွတ်မှုသည် ဧဝံဂေလိနယ်ပယ်တွင် အလွန်တန်ခိုးကြီးပြီး အထီးကျန်မှုကို မွန်း ကြပ်စေပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (စာ- ၂၉၅)
သူတို့က ကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့သောကျောင်းက ဘုရားကိုမယုံကြည်သည့် မယုံ ကြည်မှုကို သွက်သွင်းရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ ကျွန်တော်က သမ္မာကျမ်းစာကို ဆက် တိုက်ကာကွယ်နေမည်ဆိုလျှင် တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ကြောင်း ကို ပြောကြသည်။ “အဲလိုရင်းနှီးရမည်ဆိုလျှင်၊ ဘာမျှမလိုချင်” ဟု ပြန်လည်ချေပပြောဆိုခဲ့ပါ သည်။
ထိုရပ်တည်ချက်ကို ရယူရန် ရှိသမျှကို စွန့်လွှတ်ရသည်။ အဘယ်အရာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ ရသနည်း။ ကျွန်တော့်အား ဘုရားသခင်ဆင်ခြင်စေသောအရာများကို စွန့်လွှတ်ရပါသည်။ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် ကျွန်တော်လိုချင်သောအရာကို လက်ဝယ်မရှိကြတော့ ပါ။ ဂိုဏ်းဂနကို ကျွန်တော်မုန်းတီးသည်။ သင်တန်းကျောင်းကိုလည်း မုန်းသည်။ ကျွန်တော့်ကို မထောက်ပံ့သည့်အတွက် အသင်းတော်ကိုလည်း မုန်းသည်။ မိမိအသက်တာကိုလည်း မုန်း သည်။ ယေရှုနှင့်သမ္မာကျမ်းစာကလွဲ၍ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကို မုန်းသည်။ ညအချိန်၌ တစ် ယောက်တည်းလျှောက်လည်သည်။ ဆက်လက်လျှောက်နေသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် စိတ်ခံစား ချက်ဆုံးရှုံးမည့်သဘောရှိသည်။
တညတွင် မိမိအိပ်ယာထက်၌ အိပ်မောကျနေသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က ကျွန် တော်ကို နှိုးပေးသည်။ အဆောင်က တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ အသံလုံးဝမကြားရတော့ပါ။ အ မှောင်ထဲသို့လမ်းလျှောက်သည်။ သင်တန်းကျောင်းဘေးရှိတောင်စောင်းလေးတစ်ခုတွင် ရပ် နေခဲ့သဖြင့် ဘေးမြစ်ရေကိုဖြတ်၍ တဘက်ကမ်းရှိဆန်ဖရင်ဆစ္စကို၏အလင်းကို လှမ်းမြင်နေ ရသည်။ လေသည် ကျွန်တော့်ဆံကေသာနှင့်အဝတ်အစားများကို ဖွဖွလေးတိုးဝှေ့သည်။ အရိုးများက ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာသည်။ လေညှင်းထဲက ဘုရားသခင့်အသံမှာ “သင်သည် ဤည ကို လုံး၀မေ့မည်မဟုတ်။ ယခု ငါ့ကျေနပ်ဖို့ တရားဒေသနာဟောဖို့ရန်သာဖြစ်သည်။ ယခု မ ကြောက်ရွံ့အောင် သင်ယူလေ့လာရမည်။ ငါ့ကိုသာ စကားပြောရမည်။ ငါသည် သင်နှင့်အတူ ရှိမည်” ဟု မိန့်တော်မူသည်။
အဲ့ဒီအရာမှာ တရားဟောရန် ကျွန်တော့်အား ခေါ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မတိုင် မှီတွင် ကျွန်တော်သည် ကိုယ်ကျိုးစွန့်သာဖြစ်ပါသည်။ ယခုမူကား ဘုရားသခင်ခေါ်သော တရားဟောဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌တူညီသော အကြပ်အတည်းများဖြင့် သွားနေသော အကြောက်အရွံ့ကင်းသောတရားဟောဆရာတိုင်းသည် သမ္မာတရားကို ဟော ပြောရန် သူ့ကို ကိုးစားကြပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလုံးဝမရှိပါ။ “သင်သည် ဤအကြောင်းကို မ ပြောလျှင် အဘယ်သူမျှသိမည်မဟုတ်။ ဤအရာသည် ဟောပြောသက်သေခံရန်လိုအပ်ပါ သည်။ ထိုအကြောင်းကိုဟောပြောရန် အခြားသူများက ကြောက်ရွံ့နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဟောပြောတော်မမူလျှင် မည်သူမျှ ဟောပြောမည်မဟုတ်။ အနည်းဆုံး ကောင်း ကောင်းတောင် ပြောနိုင်ကြမည်မဟုတ်ပါ” ဟူသောအချက်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်စိတ်ထဲ တွင် ထာဝရတွယ်ကပ်နေသောထိုအချက်များဖြင့် ခရီးသွားနေရသည်။ ဒေါက်တာ A. W. Tozer က ၎င်းရေးသားသောစာအုပ်တွင် “ပရောဖက်အမြင်ဆုကျေးဇူး” ဟု ဤအရာကို သမုတ်ထားပါသည်။ “သူသည် ဘုရားသခင်နာမ၌ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုကြသည်။ လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုကြသည်။ အခိုင်အမာငြင်းဆိုကြသည်။ သို့ဖြင့် ခရစ်ယာန်နယ်ပယ်၏ကြီးမားသောအ မုန်းအငြိုးနှင့်ဆန့်ကျင်မှုကို ခံခဲ့ကြရသည်။ …သို့ရာတွင် ခဏရှုရှိုက်သောအသက်ရှုခြင်း၌ အ ဘယ်အရာကိုမျှ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါ” ဟုဆိုသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်သာလျှင် ဒေါက် တာ Bob Jones III က ကျွန်တော်သည် “ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ဖက်တစ် ဦးနှင့်တူညီသည်” ဟုဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ဆက်လက်ရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းဖြစ်သည့် “ကြောက်ရွံ့ခြင်းများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခြင်း” စာအုပ် ကိုဖတ် ပါ။
ဘုရားသခင်နှင့်ထိုညအတွေ့အကြုံက ဂိဒေါင်ကဲ့သို့သောလူတစ်ဦးအကြောင်းကို နား လည်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ့အား “ခွန်အားကြီးသော အချင်းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရား သည် သင်နှင့်အတူ ရှိတော်မူ၏” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် ဂိဒေါင်မဟုတ်မှန်း သိသော်လည်း သူ့အကြောင်းကို အခုတော့ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်လာသည်။ ဂိဒေါင်က “ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့ကို စွန့်၍ မိဒျန်လူတို့လက်သို့ အပ်တော်မူပြီတ ကား” ဟု ဆိုသည်။ ( တရား ၆း ၁၃ )
ဂိဒေါင်သည် ဤအမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန် မထိုက်တန်၊ မလုပ်ဆောင်နိုင်သောသူအဖြစ် မိမိကိုယ်ကိုခံစားမိသည်။ မောရှေ့ကဲ့သို့ပင် ဂိဒေါင်သည် အကြောင်းပြချက်ပေးထားသည်။ ဆိုးသွင်းညစ်ညူးသောအချိန်ကာလကြီးအလယ်တွင် ကျွန်တော်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများစွာ ရှိ ကြပါသည်။ နယူးဧဝံဂေလိမိဒျန်လူမျိုးများကိုတိုက်ခိုက်ရန် မထိုက်တန်၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ မှားယွင်းသောအရာသည် အလွန်ပင် နက်နဲလွန်းလှသည်။ ဧဝံဂေလိမိဒျန်လူတို့တန်ခိုးသည် အလွန်ကြီးမားသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာသော်လည်းကောင်း ဤမှားယွင်မှုထဲ က သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိ ဘုရားသခင်ကိုသော်လည်းကောင်း ကယ်တင်ရန် အဘယ်အရာကိုမျှ စွမ်းဆောင်ပြနိုင်မည်မဟုတ်။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သမ္မာကျမ်းထဲက ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်လျက်ရှိသည်။
ဘုရားသခင်က “ငါသည် ဘုရားသခင်၊ မပြောင်းလဲသောဘုရားဖြစ်သည်” ( မာလခိ ၃း ၆ )) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ဂိဒေါင်အပေါ်သို့ ဆင်းသက် တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် မိဒျန်လူမျိုးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ ဣသရေလူတို့ကိုစုရုံးရန် စေတမန်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
“ယေရုဗာလအမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သော ဂိဒေါင်သည် နံနက်စော စောထ၍၊ ရှိသမျှသောသူတို့နှင့်တကွ ဟာရုတ်ရေတွင်းနားမှာ တပ် ချသဖြင့်၊ မိဒျန်တပ်သည် မြောက်ဘက်၊ မောရေတောင်ခြေရင်း ချိုင့်၌ရှိ၏။ ထာဝရဘုရားကလည်း၊ သင်၌ပါသောလူတို့သည် အ လွန်များ၍၊ သူတို့လက်၌ မိဒျန်လူတို့ကို ငါမအပ်ရ။ အပ်လျှင် ဣသရေလအမျိုးက၊ ငါ့လက်ရုံးသည် ငါ့ကိုကယ်တင်ပြီဟု ငါ့တ ဘက်၌ ဝါကြွားကြလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်၍၊ ကြောက်လန့်သောသူ မည် သည်ကား၊ ဂိလဒ် တောင်မှစောစောပြန်သွားစေဟု လူများတို့အား ဟစ်ကြော်လောဟု ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူသဖြင့်၊ လူနှစ်သောင်း နှစ်ထောင်ပြန်သွား၍ တစ်သောင်းကျန်ရစ်၏။” ( တရား ၇း ၁-၃ )
ဘုရားသခင်က “သင်နှင့်အတူရှိသောလူတို့သည် အလွန်များပြား၏” ဟု မိန့်တော်မူ သည်။ “ကြောက်လန့်သောသူမည်သည်ကား၊ ဂိလဒ်တောင်မှစောစောပြန်သွားစေ” ဟု သွား ၍ပြောစေသည်။ ( တရား ၇း ၃ )
ထိုအရပ်မှ လူပေါင်း နှစ်သောင်းကျောင် ပြန်လှည့်သွားခဲ့ကြသည်။ တစ်သောင်းကျော် သည် ဂိဒေါင်နှင့်အတူ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချက်သည် ကျွန်တော်တို့တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သည် Le Conte အထက်တန်းကျောင်းတွင် စတင်တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က ၁၁၀၀ ဦးဖြင့် ခရီးဆက်ခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် အများစုသည် ခရစ် တော်အတွက်အသက်ရှင်ရန် ကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြသည်။ အခြားသောသူများက “ရယ်ရွှင်ဖွယ်”၊ သို့မဟုတ် လိင် သို့မဟုတ် မူယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ကြသည်။ စွန်ခွါထွက်သွားသောသူ များအကြောင်းကို မျိုးစေ့ကြဲသူများ ဥပမာတွင် ယေရှုက ဖော်ပြထားပါသည်။ လုကာ ၈း ၁၀- ၁၅ က ထိုဥပမာကို ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ပထမလူတို့သည် ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသိ ရသော်လည်း မာရ်နတ်သည်လာ၍ “သူတို့ယုံကြည်ပြီး ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ မည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်” ( လုကာ ၈း ၁၂ ) နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှုတ်ယူသွားခဲ့သည်။ အပတ်တိုင်း လိုလို ထိုသို့သောသဘောကိုတွေ့ရပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့လာသော်လည်း တရားဒေသနာကို နားထောင်မည့်အစား ၎င်းတို့၏ဖုန်းကိုသာ ကလိနေကြသည်။ သို့မဟုတ် သူတို့သည် မျက်စိမှိတ်ကာ အခြားတစ်စုံတစ်ခုအကြောင်းကို တွေးတောနေကြသည်။ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် သူတို့အဖို့ အကျိုးမရှိ။ အကြောင်းမှာ သူတို့နှလုံးသားထဲက နှုတ်ကပတ်တော်ကို မာရ်နတ်က ဆွဲနှုတ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဒုတိယလူတို့မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြား၍ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် လက် ခံသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့၌ ခရစ်တော်အတွက် အခန်းမရှိ။ သူတို့သည် ခဏ တာတော့ ယုံကြည်လက်ခံကြဟန်တူပါသည်။ သို့သော် သူတို့သည် သွေးဆောင်ဖြားယောင်း မှုကိုခံလာကြသောအခါ လဲကျရှုံးနိမ့်ကြပါသည်။
တတိယလူတို့မှာ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီး မိမိလမ်းသို့လိုက်သွားသောသူ များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့နောက် သူတို့ကို လောကစည်းစိမ်တပ်မက်စရာများက လွှမ်းမိုးလာကြ သောအခါ “အသီးအပွင့်မသီးပွင့်လာနိုင်ကြတော့ပါ။” ဒေါက်တာ J. Vernon McGee သည် ဤလူသုံးမျိုးတို့သည် သီးပွင့်ခြင်းအလျင်းမရှိဟုဆိုသောအခါ အမှန်ကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာအားလုံးက အတိတ်တွင် အသင်းတော်ကိုစွန့်ခွါသွားသောလူများကို ပုံဆောင်ထား ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူတို့တွင် အဘယ်သူမျှ ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ကြောင်းကို ၎င်းတို့အသက် တာက ညွှန်ပြနေပါသည်။ သူတို့သည် အသင်းတော်ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးသို့ လာရုံသက် သက်သာ လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် စုံစမ်းခြင်းကို ခံလာကြသောအခါ စွန့် ခွါသွားကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် လုံးဝမပြောင်းလဲကြပါ။ သူတို့သည် ဒုတိယမွေးခြင်းမခံကြဘူးပါ။ သူတို့သည် ဂိဒေါင်ကိုအကူအညီပေးဖို့လာကြသော်လည်း ဘုရား သခင်၏စစ်သားများဖြစ်လျက် တိုက်ခိုက်ဖို့ရန် ကြောက်ရွံ့နေကြသော လူပေါင်း နှစ်သောင်း ကို ပုံဆောင်ထားပါသည်။ ကားတိုင်တော်စစ်သားများဖြစ်သည်။
သို့သော် လူက များနေသေးသည်။ ဘုရားသခင်က ဂိဒေါင်အား “လူတို့သည် အလွန် များသေး၏။ ရေဆိပ်သို့ခေါ်ခဲ့လော့။ သူတို့ကို ရေဆိပ်မှာ သင့်အဖို့ ငါစုံစမ်းမည်” ( တရား ၇း ၄ ) ဟု မိန့်တော်္မူခဲ့သည်။ မောရေတောင်ခြေရင်းချိုင့်သည်” ( တရား ၇း ၁ ) အလွန်ပူပြင်း၏။ ဣသရေလလူတို့သည် ဆာလောင်မွတ်သိပ်လာကြသည်။ ဂိဒေါင်၏လူအများစုတို့သည် ရေရှိ ရာသို့ အလျှင်အမြန်သွားကြပြီး ငုံလျက် ရေကိုလက်နှင့်ခတ်သောက်ကြသည်။ “ထိုအခါ မိမိ လက်ခုပ်နှင့်ရေကိုယူသဖြင့် လျက်၍သောက်သောသူ သုံးရာရှိ၏။ ကြွင်းသောသူအပေါင်းတို့ သည် ရေသောက်ခြင်းငှါ ဒူးထောက်၍ဝပ်ကြ၏။” ( တရား ၇း ၆ ) အများစုတို့သည် အလွန် ရေ ဆာသောကြောင့် ရေကို လက်နှင့်ခပ်၍သောက်သုံးကြပါသည်။ သူတို့က ခေါင်းကိုမော့ပြီး မိဒျန်လူတို့အလာကို အကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည်ကို သိကြသည်။
“ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လျက်၍သောက်သောသူသုံးရာအားဖြင့် သင့်ကို ငါကယ်တင်၍ မိဒျန်လူတို့ကို သင့်လက်၌အပ်မည်။ ကြွင်း သောသူတို့ကို မိမိနေရာသို့ပြန်သွားစေဟု ဂိဒေါင်အားမိန့်တော်မူ ၏။” ( တရား ၇း ၇ )
ဂိဒေါင်၏ထိုလူသုံးရာဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် သွားနိုင်သမျှအတိုင်း ယနေ့ညတွင် သွားကြမည်။ မိဒျန်လူမျိုးများသည် ချိုင့်ဝှမ်းတွင် “နှံကောင်များလိုများပြားကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ကုလားအုပ်အရေအတွက်သည်လည်း မရေမတွက်နိုင်အောင်၊ ပင်လယ်ကမ်းနားက သဲလုံး များပမာများပြားလှသည်။” ( တရား ၇း ၁၂ ) ထိုညတွင် ဘုရားသခင်သည် အင်အားကြီးမားလှ သော မိဒျန်စစ်တပ်ကို ဂိဒေါင်၏လူသုံးရာလက်သို့အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ မိဒျန်လူတို့သည် အသက် လွတ်ရာ ပြေးကြသည်။ ဣသရေလလူတို့က မိဒျန်တို့၏ဗိုလ်ချုပ် ဩရဘနှင့်ဇေဘတို့ကိုဖမ်း ဆီးပြီး ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းကို ဂိဒေါင်ထံသို့ ဆောင်ယူခဲ့ ကြသည်။ ( တရား ၇း ၂၅ ) ဘုရားသခင်သည် သုံးရာသောစစ်သားများဖြင့် အောင်ပွဲခံခဲ့သည်။
ဤနေရာတွင် ကျွန်တော်တို့အတွက် သင်ခန်းစာရှိပါသည်။ အသင်းတော်အများစုကို လူအရေအတွက်သာစိတ်ဝင်စားသော လူများက ဦးဆောင်ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဧဝံဂေလိ မိဒျိန်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားကျောင်းတက်ဦးရေတစ်ရာကျော်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ထင် မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် တန်ခိုးမရှိကြ။ ထိုသို့သောတရားဟောဆရာများ က ဂိဒေါင်နှင့်၎င်း၏သစ္စာရှိသောစစ်သားအနည်းငယ်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့လျှင် ပိုမိုအသုံးဝင်ပေလိမ့်မည်။
Jonathan S. Dickerson က ဧဝံဂေလိဆုတ်ယုတ်ခြင်း အမည်ရှိစာအုပ်ကို ရေး သားပြုစုခဲ့သည်။ (Baker Books) သူသည် နည်းဗျူဟာကို အသုံးပြုထားသည်။ ယနေ့တွင် ၇% ရာခိုင်နှုန်းသောလူငယ်များသာ ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များဟု မိမိကိုယ်ကိုခေါ်တွင်ကြပါ သည်။ လေးဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းသော ဧဝံဂေလိခရစ်ယာန်များသည် နောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်တွင် သေဆုံးကြပေလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စည်းမျည်းစည်းကမ်းသစ်မထုတ်ပြန်နိုင်လျှင် ဧဝံဂေ လိခရစ်ယာန်လူငယ်များသည် ၇% မှ “၄ ရာ ခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် အောက်လျှောကျသွားနိုင်ပါ သည်။” ( ၎င်း၊ စာ-၁၄၄ )
အသင်းတော်၌ လူငယ်များသည် အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့လျော့နည်းလာပါသနည်း။ သူတို့သည် အသက်ရှင်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ၏စိတ်ခေါ်မှုတွင် ရှိမနေကြသောကြောင့် ဖြစ် သည်ဟု ယူဆမိသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ အဘယ်နည်း။ ဤအသင်းတော်၌ ကျွန်တော်တို့၏ပန်းတိုင်မှာ လူငယ်များကို ခရစ်တော်၌ အမြင့်ဆုံးအဆင့်၌ ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဂိဒေါင်၏စစ်တပ်ကဲ့သို့သောလူငယ်အုပ်စိုကို မွေးထုတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ လူငယ်များအသင်း တော်တို့လာရောက်ပါဝင်နိုင်ရန် အကူအညီပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏တပည့်တော်ဖြစ်လာ ရန်၌ အကူအညီပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏စစ်သားအဖြစ်စာရင်းပေးသွင်းစေလိုသောသူတို့ မှာ လူငယ်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် အသစ်၊ အသစ်သောအရာနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြသော လူငယ်များပင်ဖြစ်ကြသည်။ ယေရှုက ဤသို့ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“အကြင်သူသည် ငါ၌ဆည်းကပ်ခြင်းငှါ အလိုရှိ၏။ ထိုသူသည် ကိုယ်ကို ကိုယ်ငြင်းပယ်ရမည်။ ကိုယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်း၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ရမည်။” ( မာကု ၈း ၃၄ )
ယေရှုနောက်သို့လိုက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှုမရှိလျှင် မည်သို့သောပေးဆပ်မှုရှိပါစေ၊ အကျိုးမရှိ။ အ သုံးမရဖြစ်မည်။ ကလေးကဲ့သို့ အပြုစုအယုယခံလိုသောသူတို့သည် “ပြုစုသူ” များအဖြစ် ခေါ် ခြင်းခံရသူများဖြစ်သည်။ “ပြုစုသူများ” သည် မိမိကိုယ်ကို မငြင်းပယ်လိုကြပါ။ ယေရှုကို ဘာမျှ မပေးလိုကြပါ။ ထာဝရစောင့်ရှောက်ခံလိုလျှင် ဤသည်မှာ သင့်အတွက် အဆင်ပြေသည့် အ သင်းတော်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော့်ဇနီးသည် Ileana သည် ဆယ့်ခြောက်နှစ်အရွယ်တွင် ကျွန်တော်တို့အသင်း တော်သို့လာခဲ့သည်။ သုံးပတ်အတွင်း ဘုရားကျောင်းသို့ သူသွားရမည့်လမ်းကို တွေ့ရှိခဲ့ပါ သည်။ သုံးပတ်လောက်ရှိသောအခါ ဘုရားကျောင်းလာရန် သူ့ကို “ခေါ်ဖို့” မလိုတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင် အလုပ်လုပ်သူအဖြစ် အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင် တယ်လီဖုန်းစောင့်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမသည် အ သက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင် ကျွန်တော့်ကို လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမွှာပူးလေးမွေး သည့်အချိန်၌ ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့မှာ သူတို့ကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏ သား Leslie သည် သူမွေးသည့်အချိန်မှစ၍ ဘုရားကျောင်းကို တစ်ခါမျှ မပျက်ဘူးပါ။ Wesley သည် သူ့ဘဝတစ်ခုလုံး၌ နာမကျန်းသောကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ အချို့သောအမျိုးသမီးများက ဒါကတော့ နည်းနည်းများသွားပြီဟုဆိုကြသည်။ သူတို့က ၎င်း တို့ကလေးများ နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်လျှင်ပင် အိမ်၌ သိပ်ထားခဲ့ကြသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန် တော်ဇနီးသည်လုပ်ဆောင်သည်မှာ မှန်ကန်မှုရှိပြီး အခြားသူများက မှားယွင်းကြပါသည်။ မိမိ ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသက်ရှင်ရုန်းကန်ရန် အခြားသောကလေးများက ဘုရားကျောင်းကို စွန့် ခွါခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်သားငယ်နှစ်ဦးသည် ယနေ့အစည်းအဝေးတွင်လည်း ဤနေရာ၌ရှိနေ ကြသည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးသည် ခရစ်တော်၏တပည့်တော်ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့သည် ဤနေ ရာသို့ရောက်နေကြသည်။ မကြာခင် ကျွန်တော်တို့က အသက်ခြောက်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ ကျင်း ပပေးမည့် ဒေါက်တာ Kreighton L. Chan က မစ္စ Hymers ရေ “ကျွန်တော်တို့အသင်းတော် ကို ပထမဆုံးရောက်လာချိန်၌ သူမကိုသိသည်။ သူသည် ခရစ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ချစ်သလို ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကိုလည်းချစ်သည်။ ( ဆယ်ကျော်သက် ) သူမလေးက မိမိ အ သက်တာကို အသင်းတော်လုပ်ငန်းအတွက် ဆက်ကပ်ခဲ့သည်။ ဘာမျှ နောက်ဆန်မတင်းပါ။ လူငယ်တို့၊ မစ္စ Hymers သည် သင်တို့ရဲ့ စံဖြစ်ပါစေ။ သူမရဲ့ ဥပမာကိုလိုက်လျှင် ကျွန်တော် တို့၏အသင်းတော်သည် တောက်ပပြီးအသရေရှိသော အနာဂတ်ရှိလာပေမည်” ဟုဆိုသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဒေါက်တာ Chan ၏ အသက် ခြောက်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ကျင်း ပကြမည်ဖြစ်၍ သူသည်လည်း ခရစ်တော်၏တပည့်ဖြစ်ကြောင်း တောက်ပသောဥပမာဖြစ် သည်အကြောင်းကို ပြောလိုပါသည်။ သူသည် အသင်းတော်၏သိက္ခာရဆရာတော်ဖြစ်ပါ သည်။ သူသည် ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသည်။
သူသည် ငယ်စဉ်ဘဝတစ်ခုလုံးတွင် နာမကျန်းဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံတွင်သာ အချိန်ကုန် ဆုံးနေခဲ့ပါသည်။ သူသည် ဆေးပညာကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အတွက် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် တွင် ကျွန်တော်တို့ထံသို့ရောက်လာခဲ့သည်။ အခြားဆေးဆရာဝန်များက အသက်သုံးဆယ်အ ရွယ်အထိ အသက်ရှင်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုကြသည်။ သူသည် အလွန်အားနည်းသောသူဖြစ်လာ မည်ဖြစ်၍ အသင်းတော်က ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သူ သည် အသင်းတော်လုပ်ငန်းအတွက် မိမိအသက်တာကိုဆက်ကပ်ပြီး ခရစ်တော်၏တပည့် တော်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့က မိမိကိုယ်ကို အားထုတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုရန် ပြောဆိုကြသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် သူသည် အသက်သုံးဆယ်မတိုင်မီ အသက်ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ် သောကြောင့်ပေတည်း။ သို့ရာတွင် ခရစ်တော်၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းက ဒေါက်တာ Chan ကို အားကြီးစေသည်။ သူသည် ကောင်းမွန်သန်မာသောအသက်တာဖြင့် မျှော်လင့်ထား သည့် အသက်သုံးဆယ်ထက်ပို၍ အသက်ရှင်နေထိုင်သည်။ သူသည် မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင် ကိုထမ်း၍ ယေရှုနောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ သို့သောကြောင့် သူသည် ယခုတွင် အသက်ခြောက် ဆယ်တိုင်အောင် ဘုရားသခင်၏အားကြီးသောသူအဖြစ်နှင့် ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ယခု ထိုင်နေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ညတွင် သူ့မိန်းမနှင့်အတူ ထွက်သွားကြသောမစ္စတာ Mencia နှင့်မစ္စ Salazar ၊ မစ္စတာ Ben Griffith တို့အကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက်ပြီး ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤအဆောက်အဦးကိုဝယ်ယူရန် ငွေကြေးအများစုကိုပေးသော မစ္စတာ နှင့်မစ္စ Virgel Nickell အကြောင်းကိုလည်း အများကြီးပြောဆိုနိုင်ပါသေးသည်။ မစ္စတာ Nickell သည် အသက်အ ရွယ်အားဖြင့် ၇၅ နှစ်ခန့်ရှိနေပြီ။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွင် ဘုရားကျောင်း တက်ရန် ဗုဒ္ဒဟူးည၊ တနင်္ဂနွေမနက်နှင့်ညနေပိုင်းတို့တွင် နာရီတစ်ချက်ကျော်စီ ကားမောင်းပြီး လာခဲ့သည်။ ဤအသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကို မကြာမီတာဝန် ယူလာမည့် Rev. John Samuel Cagan သည် အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်သည့် လူ ငယ်အမှုတော်ဆောင်လေးဖြစ်ကြောင်းကို ပြောပြလိုပါသည်။ ဤသူတို့အားလုံးသည် ခရစ် တော်၏တပည့်တော်များဖြစ်ကြသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းရွက်သော စစ်သူရဲများဖြစ်ကြ ပါသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ Timothy Lin က“နည်းတာက များတာ ထက် ကောင်းပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ထိုင်ခုံတိုင်းပြည့်နေသည်။ သို့သော် ဆုတောင်းအစီ အစဉ်တွင် အနည်းငယ်သာလျှင် ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။ အဲဒီအရာက ကျန်းမာသောအသင်း တော်ဟု သတ်မှတ်ရခက်တယ်” ဟုဆိုပါသည်။ ” ( အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်းလှို့ဝှက်ချက်၊ စာ- ၃၉ )
ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါ။ “များတာထက်နည်းတာပိုကောင်းသည်” အကြောင်း ကို အဖန်တလဲလဲ မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ယေရှုသည် လူ ၁၁ ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အကြောင်းမှာ သူ့လူတို့သည် သူ့အတွက်နှင့်သူ့အမှုတော်အတွက် အသက်ကိုပင် ပေးလိုသောစိတ်ရှိကြသည်။ အသင်းတော်သမိုင်းကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် ထိုသို့ သောအဖြစ်မျိုးကိုတွေ့ရသည်။ ပင်္တေကုတ္တိနေ့တွင် လူပေါင်း ၁၂၀ ဦးသာ တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။ ခေတ်သစ်သာသနာလုပ်ငန်းကို မိုရေးဗီယာန်းအနည်းငယ်ကသာ အစပြုလုပ်ဆောင် ကြပါသည်။ မက်သဒစ်အနည်းငယ်၊ လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်ကသာ နိုးထမှုကြီးကို ဖြစ်စေ ကြပါသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် James Hudson Taylor ၏ နောက်သို့ လူနည်းစုသာ လိုက်ကြသည်။
ခရစ်တော်အတွက် တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးပေးဆပ်လိုစိတ်မရှိသောသူတို့သည် အသုံးမဝင်ကြပေ။ ကလေးကဲ့သို့ထာဝရအဆက်ဆံခံလိုသောသူတို့သည် အသုံးမဝင်ကြပါ။ အမြဲတမ်းအနှိမ့်သိမ့်၊ အချောခံရသည့်နယ်ပယ်ထဲကျင်လည်နေသူသည်လည်း အသုံးမဝပါ။ သူတို့သည် ခရစ်တော်အတွက် ဘာတစ်ခုမျှ မ ပေးသော ထာဝရ “ရယူသူများ”သာဖြစ်ကြပါ သည်။ သင်သည် အသင်းတော်၌ တပည့်တော်များရှိစေလိုလျှင် “အမြဲရယူလိုသူများ” ကို သွားခိုင်းရမည်။ နယူးဧဝံဂေလိမိဒျန်များကိုစိန်ခေါ်ပြီး ပြောင်းလဲစေမည့် လူငယ်များကို သွား ခိုင်းရမည်။ ခရစ်တော်အတွက် မိမိအသက်ကိုပင်မနှမြောဘဲ ပေးဆပ်လိုသောသူများကို ခွန် အားပေးတိုက်တွန်းရမည်။ ဘယ်တော့မျှ မကြီးထွားဘဲ ကလေးကဲ့သို့ အမြဲဆက်ဆံစေလို သောသူများကို ခွန်အားပေး တိုက်တွန်းခြင်း မ ပြုရပါ။ ယေရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လိုသောသူ များကို ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းရမည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့မဖြစ်လိုသူများကို ဂိဒေါင်ကဲ့သို့ အိမ်ပြန် ခိုင်းရမည်။
သင်တို့ကိုင်သော သီချင်းစာရွက်ထဲက သီချင်းနံပါတ် ၁ “ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီ” ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီဆိုကြပါစို့။
(“ခရစ်ယာန်စစ်သည်တို့ချီကျူး” Sabine Baring-Gould, ၁၈၃၄-၁၉၂၄ ).
“တက်ကြခရစ်ယာန်စစ်သည်၊” (Sabine Baring-Gould, ၁၈၃၄-၁၉၂၄ ရေးစပ် သည်။ )
၁။ ပထမအချက်၊ ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်ပယ်ခြင်း၊ တရား ၆း ၁၂၊ ၁၃။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ သမ္မာကျမ်းထဲက ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်လျက် ရှိသည်။ မာလခိ ၃း ၆၊ တရား ၇း ၁-၃၊ လုကာ ၈း ၁၂၊ တရား ၇း ၄၊ ၁၊ ၆၊ ၇၊ ၁၂၊ မာကု ၈း ၃၄။